दुर्गा घिमिरेलाई १ लाखको समाजसेवा पुरस्कार – erupse.com
विन्ध्यवासिनी धार्मिक क्षेत्र विकास समितिले प्रदान गर्ने हेमदेवी धर्म, संस्कृति तथा समाज सेवा पुरस्कार यस वर्ष महिला बेचबिखन बिरुद्ध तथा महिला सशक्तिकरणका क्षेत्रमा क्रियाशील दुर्गा घिमिरेलाई प्रदान गरिने भएको छ । समितिले प्रत्येक २ वर्षमा प्रदान गर्ने १ लाख १ हजार रुपैयाँ राशीको पुरस्कार यस वर्ष घिमिरेलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
२००५ साल बैशाख ३ गते सुनसरीको धरानमा जन्मेकी दुर्गा घिमिरेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयवाट सन् १९७० मा अर्थ शास्त्रमा एम.ए. र १९७५ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयवाटै कानुनमा स्नातक गरेकी छिन् । २०३३ सालदेखि सामाजिक सेवा र महिला अधिकारको क्षेत्रमा उनी क्रियाशील छिन् । मानव अधिकार, चेलिवेटी बेचबिखनको विरुद्धको अभियानमा सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय रुपमा वहसको विषय वनाई उठान गर्ने पहिलो व्यक्तिका रुपमा घिमिरेलाई हेरिन्छ । २०४४ सालमा एबिसी. नेपाल नामक गैरसरकारी संंस्थाको स्थापना गरी महिला बेचबिखन बिरुद्ध लागेकी थिइन् । घिमिरेले हालसम्म ३ हजार चेलीहरुको उद्धार तथा समाजमा पुनस्थापना गरी उनिहरुको जीवनलाइ रुपान्तरण गर्न सफल भएकी छन् ।